Mogadishu Journal » HORDHAC: Man Utd vs Liverpool: Kulanka Ugu Weyn Premier League Oo Go’aamin Kara Dagaalka Booska labaad
Liverpool ayaa ka saari karta Manchester United kaalinta labaad haddii ay ku guuleystaan galabta garoonka Old Trafford oo ay labada koox ku kulmayaan.
Afartii kulan ee ugu dambeysay labada kooxood ayaa ku dhamaaday barbaro, waxaana tababare Jose Mourinho laga barbareeyay labo gool oo uu la hormaray seddexdii kulan ee ugu dambeysay ee uu la ciyaaray Liverpool isagoo tababare u ah United.
Tababaraha United ayaa sheegay ka hor ciyaarta in weli kooxdiisa ku dagaalameyso tartanka loogu jiro booska labaad ee kala sarreynta Premier League.
SAACADA: 3:30 PM
Marouane Fellaini ayaa kusoo laabtay kulankan ka dib markii uu dhaawac kasoo gaaray jilibka bishii Janaayo.
Zlatan Ibrahimovic iyo daafaca dhexe Eric Bailly ayaa si buuxda taam u ah, laakiin Ander Herrera, Marcos Rojo, Anthony Martial, Phil Jones iyo Daley Blind ayaa weli maqan.
Jordan Henderson, Andrew Robertson iyo Georginio Wijnaldum ayaa dhamaantood diyaar u ah kooxda Liverpool.
Henderson ayaa tababarka kusoo laabtay ka dib markii uu seega kulankii Porto ee Champions League, halka Robertson iyo Wijnaldum labadoodaba xanuun ay ku seegeen kulankii ugu dambeeyay.
Nathaniel Clyne ayaa weli ka maqan Reds, laakiin tababare Jurgen Klopp ayaa ku faraxsan awooda daafaciisa midig .
Laba ka mid ah seddexdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka ee u dhaxeyay labada kooxood ayaa ku dhamaaday barbar dhac – kaliya mid ka mid ah 49kii ka horeeyay ayaa sidaas ku dhamaaday.
Manchester United ayaa badisay 10 ka mid ah 13kii kulan ee ugu dambeyay oo ay garoonkooda kula ciyaarto Liverpool.
Kulankaan wxaa lagu bixyay 16 kaar oo casaan ah – keliya Merseyside derby ayaa ka casaan qaadasho badan.
Romelu Lukaku ayaa dhaliyay 99 gool oo Premier League ah; Hadii uu goolal ka dhaliyo kulankaan waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii shanaad ee ugu da’da yaraa ee 100 gool ka dhaliya horyaalka England.